विश्वकपमा कुन क्लबका खेलाडी धेरै ? – आफ्नो प्रेरक संसार
विश्वकपमा कुन क्लबका खेलाडी धेरै ?
Bibas chetan — २६ जेष्ठ २०७५, शनिबार १६:५०0comment
जेष्ठ २६-एजेन्सी – प्रिमियर लिग टोली म्यानचेस्टर सिटीका सर्वाधिक १६ खेलाडी विश्वकपमा सहभागी हुँदै छन् । इंग्ल्यान्डका फाबियन डेल्फ, रहिम स्टरलिङ, जोन स्टोन्स र काइल वाल्करसँगै स्पेनका डेविड सिल्भा विश्वकपमा खेल्दै छन् । यसबाहेक ब्राजिलका ड्यानिलो, एडरसन, फर्नान्डीन्हो र ग्याब्रिएल जेसस तथा विश्वकपको साविक विजेता जर्मनीका इल्काए गुन्डोगन पनि टोलीमा छन् । अर्जेन्टिनाबाट सर्जियो अगुएरो र निकोलास ओटामेन्डी तथा बेल्जियमबाट केभिन डे ब्रुएन र भिन्सेन्ट कम्पनि खेल्दैछन् । पोर्चुगलका बर्नार्डो सिल्भा र फ्रान्सका बेन्जामिन मन्डी पनि विश्वकपमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
दोस्रो स्थानमा रियल म्याड्रिडका १५ खेलाडी विश्वकप टोलीमा छन् । ब्राजिलका क्यासेमिरो र मार्सेलो तथा क्रोएसियाका लुका मोड्रीच र माटियो कोभाचिचसँगै फ्रान्सका राफेल भाराने विश्वकप खेल्दैछन् । जर्मनीका टोनी क्रुस, कोस्टारिकाका केलर नाभास, मोरोक्कोका अक्रफ हाकिमी र पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डो पनि महाकुम्भमा सरिक हुनेछन् । स्पेनबाट ड्यानी कर्भाजल, नाचो फर्नान्डेज, लुकास भाज्केज, सर्जियो रामोस, मार्को एसेन्सियो र इस्को विश्वकपमा सामेल हुँदैछन् ।
तेस्रो स्थानमा बार्सिलोनाका १४ खेलाडी छन् । लिओनेल मेस्सी (अर्जेन्टिना), थोमस भर्मालेन (बेल्जियम), इभान रकिटिच (क्रोएसिया), एरि मिना (कोलोम्बिया), लुइस सुआरेज उरुग्वे र मार्क आन्देर टेर स्टेगन (जर्मनी) विश्वकपमा खेल्दैछन् । ब्राजिलबाट फिलिपे कोउटिन्हो र पाउलिन्हो खेल्दा स्यामुएल उम्टिटी र ओस्मान डेम्बेलेले विश्वकपमा फ्रान्सको जर्सी लगाउनेछन् । स्पेनिस टोलीमा जेरार्ड पिके, जोर्डी अल्बा, सर्जियो बुस्केट्स र आन्द्रेस इनिएस्टा परेका छन् ।